FITANTANANA NY ORINASA JIRAMA : Handalo fitsapana ny fanendrena ny tale jeneraly vaovao
Mbola banga hatreto ny toeran’ny tale jeralin’ny orinasa Jirama taorian’ny nivoahan’ny didim-panjakana nampitsahatra ny tale jeneraly teo aloha, Jaomiary Olivier, ny herinandro lasa teo. 21 août 2019
Araka ny fanazavana noentin’ny minisitry ny angovo sy akoran’afo dia hivoaka tsy ho ela ny fampiantsoana izay maniry ho kandidà hisahana an’ity andraikitra ity. Tsy maintsy misy ny sivana sy ny fitsapana hatao amin’ireo mpifaninana, ka ny didim-panjakana avoakan’ny Filoham-pirenena ao anatin’ny filan-kevitry ny minisitra ihany no manendry izay tale hisahana ny fitantanana ny orinasa Jirama indray. Nambarany fa mandra-piandry izany dia misy ny rafitra manokana napetraka mba hampandeha amin’ny an-tsakany sy an-davany ny asa rehetra eo anivon’ity orinasam-panjakana mpamatsy jiro sy rano eto Madagasikara ity.
Tato anatin’ny dimy taona izay, raha tsiahivina dia gaboraraka tanteraka ny fitantanana ny Jirama. Mampiteny ny moana ny fahatapahan-jiro izay nisandrahaka tamina Faritra maro manerana ny nosy. Nilokaloka ny Filoha teo fa ao anatin’ny telo volana monja dia ho voavahany io olana io kanefa tao anatin’ny fitondrany dia saika niaina tao anatin’ny aizina ny vahoaka. Hatramin’izao mbola misy tarazo navelan’io gaboraraka teo amin’ny fitantanana ny Jirama io no mbola tsy tafaverina tanteraka na dia miezaka manao izay ho afany aza ny fitondrana ankehitriny.
Heverina fa mifandraika amin’izay fanarenana izay ihany koa ny nanesorana ny tale jeneraly teo aloha tamin’ny toerany. Heverina fa tsy nahavaha ny fiverimberenan’ny olana teo amin’ny famatsiana herinaratra sy rano manerana ny nosy ny tenany. Anisany laharam-pahamehana andrandrain’ny vahoaka anefa ny hahatomombana ny fandehanan’ny jiro sy ny famatsian-drano isan-tokantrano. Olona manana traikefa sy manam-bahaolana ho amin’izay no antenain’ny besinimaro handray ny toeran’ny tale jeneraly eo anivon’ny orinasa Jirama.